Sivavanye isiseko sokutshaja ngemagneti kwi-Choululoch kwivenkile ye -ululook | Ndisuka mac
Sivavanye isiseko sokutshaja ngemagneti kwi-Chooch
Uninzi lwenu ngokuqinisekileyo luyayazi ivenkile ye -ululook kolunye uphononongo olwenziwe kwi-Soy de Mac nakwi-iPhone eyiyo. Kule meko, ivenkile eneemveliso ezininzi kwaye ezinye zazo zivela kumashishini awaziwayo anje ngeChoetech, zisithumelele isiseko sokutshaja ngemagneti ye-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro kunye ne-iPhone 12 Pro Max.
Kwimeko yethu sinemodeli ye-iPhone Pro Max kodwa isebenza nazo zonke izixhobo ezongeza ukuhlawula ngeMagSafe. Ishaja yamagnetic engenazingcingo kunye nokuma ukuya kwi-15W yongeza ukutshaja ngaphandle kwamacingo okungu-2-in-1 ukubiza zombini i-iPhone kunye ne-AirPod ngaxeshanye.
1 Uyilo, umgangatho wezinto kunye nokulayisha ngokukhuselekileyo
2 Iyahambelana ngokupheleleyo neemveliso zeMagSafe
2.1 Ukukhuselwa kwendawo yokutshaja yee-AirPods
Uyilo, umgangatho wezinto kunye nokulayisha ngokukhuselekileyo
Isiseko sokutshaja sakwa-Choetech esisibonelela nge iyasebenza ngokwenene, uyilo olugqibeleleyo olunokugqitywa okumangalisayo kunye nokukhanya kwe-LED ngaphambili okuza kusibonisa ngendlela engacacanga ngaphandle kokuphazamisa xa i-iPhone 12 yethu ihlawulisa. Ngale ndlela, sifumana isiseko kwisilivere okanye kwisithuba esingwevu, ukuze ukhethe umbala owuthanda ngakumbi. Kule revivo sisebenzise isiseko sokutshaja ngesilivere kwaye intle ngokwenene.
Izinto zokuvelisa zi-aluminium kwinxalenye ye isiseko sinzima ngokwaneleyo ukuze singashukumi xa sihlawulisa i-iPhone 12 yethu. I-T575-F ngokwenene sisiseko sokutshaja esimangalisayo.
Kuya kufuneka sithathele ingqalelo xa sithenga i-iPhone 12 ukuba ayisiyomveliso inexabiso eliphantsi ngoko ke kufuneka siyikhathalele kangangoko kunokwenzeka. Ngale ndlela, i-Choetech sisiqinisekiso sokuqina kwaye yongeza amanyathelo okhuseleko ayimfuneko khusela ifowuni yethu ekutshiseni, ukuwa ngengozi ngenxa yamandla omazibuthe omncinci okanye izinto ezinje.
Iyahambelana ngokupheleleyo neemveliso zeMagSafe
Uxolo ngokunyanzelisa oku kodwa kufuneka kugxininisiwe ukuba esi sisiseko sokutshaja uya kufumana kwiivenkile ezinjenge -ululook Nikeza itotali ukuhambelana nokutshaja kweMagSafe kwe-iPhone 12, i-iPhone 12 Pro kunye ne-iPhone 12 Pro Max kunye nezixhobo zayo.
Ngamanye amagama, ukuba unetyala elihambelana nokutshaja kweMagSafe, le tshaja inokuba luncedo kuwe. Kunika umdla ukukhumbula ukuba esi siseko sokutshaja ngaphandle kwamacingo sikwanikezela ngenketho yongeza ezinye ii-AirPods okanye ii-AirPods Pro ezantsi kwaye uvumele le ntlawulo ngexesha elinye ne-iPhone 12 yethu.
Amandla oomazibuthe kwinxalenye ye-iPhone inamandla ngokwenene, inamandla kangangokuba kuya kufuneka ubambe isiseko ukunqanda ukuyithatha xa ufuna ukususa i-iPhone yakho ekutshajiseni. Ngale ndlela, ukuba sifumanisa ukuba bekungangcono ukongeza ubunzima obuncinci ezantsi, nangona kuyinyani ukuba akukho mandla makhulu ekufuneka esetyenzisiwe ukususa i-iPhone Kuyimfuneko ukuyibamba ukuze ingathwali isiseko setafile.
Uhlengahlengiso kwindawo yokulayisha lusezantsi kakhulu, utyekelo lukhona kodwa aluninzi kangako kuya kufuneka ujike isiseko sonke ngezihlandlo ezithile. Oku kwenza iseti inokomelela okuhle kakhulu ngokubanzi ekwaxatyiswayo nayo.
Ukukhuselwa kwendawo yokutshaja yee-AirPods
Ngokusengqiqweni, esi siseko sokutshaja sikhuselekile kwaye songeza ukhuseleko lweFod ukuze emazantsi ushiye ngokukhuselekileyo ezinye izitshixo. Kwaye kunokubonakala ngathi sisiseko sokutshaja esezantsi apho Singongeza ezinye ii-AirPods okanye ii-AirPods Pro ukubiza ngaxeshanye ne-iPhone 12, inokonakalisa amaqhosha okanye izinto ezinje, kodwa oku akunjalo.
Ibhokisi yeshaja kunye nentambo yokutshaja ngaphezulu nje kwe-1 m ubude ngonxibelelwano lwe-USB C. Esi siseko sokutshaja songeza amandla amakhulu okufaka phakathi kwe-5-12 V kunye ne-2 A, kwimveliso njengoko besitshilo ngaphambili Ifikelela kwi-15 W kodwa i-iPhone kuphela kuba eyona nto iphume kakhulu kwii-headphone yi-5 W Ukuthobela i-ETL, i-FCC, i-CE kunye ne-RoHS zokuqinisekisa ukhuseleko.
Ukutshaja ukusebenza kunye nokusebenziseka lula kwe-iPhone 12 kunye nee-AirPods
Enye into enobunzima bokungaphathi isiseko xa uchola i-iPhone kuya kuba kuhle
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » Izixhobo » Sivavanye isiseko sokutshaja ngemagneti kwi-Chooch